Vita ny fitantanana fiaraha-monina | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 29, 2013 Zoma, Aogositra 30, 2013 Kelsey Cox
Na dia mety samy hafa be aza ny asan'izy ireo amin'ny indostria iray mankany amin'ny manaraka, ny mpitantana ny vondrom-piarahamonina matetika no tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny mpihaino marika sy ny firotsahana. Ny voalohany indrindra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifanao sy ny fangatahany dia mifantoka amin'izay tsara indrindra amin'ny orinasanao izy ireo: manampy ny fitazonana ireo mpankafy ny vondrom-piarahamonina marika, handresy ireo troll tsy azo ihodivirana ary hanatsara ny fomba fijerin'ny marika anao amin'ny ankapobeny.
Na ny fandefasana ny hafatra sy ny hafatra, ny fikarakarana hetsika, na ny fanovana ny fanehoan-kevitra miiba ho lasa tsara, ny mpitantana ny vondrom-piarahamonina no tetezana faratampony eo amin'ny fiarahamonin'ny mpanjifa sy ny marikao… manadidy adidy sy andraikitra maro indray miaraka. Amin'ny lafiny iray, mitaona ny mpanohana izy ireo ho tonga tompon-daka - manome azy ireo fankatoavana an-tserasera, satan'ny mpanelanelana ary fidirana manokana amin'ny mombamomba ny orinasa. Etsy ankilany, izy ireo dia mamantatra, manombatombana ary mamaha ny fifanolanana sy ny fianjerana amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina, mitazona ny valiny ratsy tsy hisy fiatraikany amin'ny sarinao orinasa.
Ahoana no ahatratrarany tanjona kendrena toy izany? Araka ny Mahazoa fahafaham-po, ny fitazonana fiarahamonina mafy orina dia sarotra nefa azo atao tokoa ho an'ireo izay manana fitaovana tsara. Zahao ny azy ireo loharanom-pahalalana ho an'ny mpitantana ny vondrom-piarahamonina ary fitarihana fahombiazana:
Tags: tompon-dakaFiaraha-miasa Communitympiandraikitra ny fiarahamoninaSerivisy ho an'ny mpanjifaSary torohaytrolls
Manandrana WordPress Jetpack Shortcode Widths
Aug 30, 2013 amin'ny 2: 49 AM
inona ny adiresy bitsika kelsey ??